musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Yese Raw Hanyanisi Iye zvino Ari Kurangarirwa Nekuda kweSalmonella
Yese mbishi hanyanisi (tsvuku, yero, uye chena) inotumirwa kunze neProsource Produce LLC yeHailey, Idaho, zvigadzirwa zvedunhu reChihuahua, Mexico, zviri kurangarirwa kubva pamusika nekuda kwekukanganisa Salmonella.
Vatengi havafanire kudya zvigadzirwa zvinoyeukwa zvinotsanangurwa pazasi kana chikafu chine hanyanisi mbishi idzi. Vatengesi, vagovanisi, vagadziri, uye nzvimbo dzekupa chikafu semahotera, maresitorendi, nzvimbo dzekudyira, zvipatara, nedzimba dzevakoti havafanirwe kushandira, kushandisa, kana kutengesa zvigadzirwa zvakayeukwa zvinotsanangurwa pazasi.
Zvigadzirwa zvinotevera zvakatengeswa muOntario neQuebec uye zvinogona kunge zvakagoverwa kune mamwe mapurovhinzi nenharaunda.
Izvi zvigadzirwa zvinogona kunge zvakatengeswa zvakawandisa kana mumapakeji madiki aine kana kuti pasina chitambi uye zvinogona kusatakura imwechete mhando kana mazita echigadzirwa sezvakatsanangurwa pazasi. Iyo CFIA ichaenderera mberi nekuferefeta kwayo kune vamwe vangango pinza uye zvimwe zviyeuchidzo zvinogona kutevera.
muchiso chigadzirwa zera UPC Codes mamwe mashoko
Big Bull Peak Fresh Produce Sierra Madre Producer Markon First Crop Markon Essentials RioBlue ProSource Rio Valley Imperial Fresh Hanyanisi dzvuku Hanyanisi dzvuku Mesh masaga: 50 lb 25 lb 10 lb 5 lb 3 lb 2 lb Makatoni: 50 lb 40 lb 25 lb 10 lb 5 lb shanduka Zvose zvinogadzirwa
31, 2021. Chigadzirwa chenyika ye
Kana iwe uchifunga kuti wakarwara nekudya chigadzirwa chakayeukwa, fonera chiremba wako.
Tarisa kuti uone kana iwe une zvigadzirwa zvakayeukwa mumba mako kana kuisirwa. Zvigadzirwa zvakarangarirwa zvinofanirwa kukandwa kunze kana kudzoserwa kunzvimbo yavakatengwa. Kana usina chokwadi nezvehanyanisi yaunayo, tarisa kwaunotenga.
Kuyeuka uku kwakakonzerwa nekuyeukwa kune imwe nyika. Canadian Chikafu Inspection Agency (CFIA) iri kuita ongororo yekuchengetedza chikafu, izvo zvinogona kutungamira mukuyeukwa kwezvimwe zvigadzirwa. Kana zvimwe zvigadzirwa zvine njodzi zvakanyanya zvikarangarirwa, iyo CFIA inozivisa veruzhinji kuburikidza neyakagadziridzwa Chikafu Recall Nyevero.
Pakave pasina kutaurwa zvirwere muCanada zvine chekuita nekushandiswa kwezvigadzirwa izvi.